Designmepụta Weebụ ahaziri ahaziri - Ndị na-eme nde
Designmepụta Ntanetị Ahaziri ahaziri
Weebụsaịtị ahaziri iche. Anyị na ụlọ ọrụ niile na-arụ ọrụ.
Nweta ngwa ngwa ị na-enwetakwa
Ahaziri iche na ahaziri iche
Ozi ịntanetị na-akwụghị ụgwọ (5 Ids na 5 GB ohere ọ bụla)
Nweta Njikwa Ogwe njikwa
Anyị pụrụ iche
Ihe anyị na-eme nchịkọta
Raara onwe ya nye na sava
Karịrị 1000+ oru Zuru ezu na Ma Na-agụta…
Ihe anyị n’eme na mmepe webụsaịtị ahaziri iche
$200.00 / Afọ
Nwepụta na-eme mgbanwe
01 - 7 Peeji
Onye mere okike 3
2 Họrọ Nhọrọ
Nrube isi nye SE
Ozi ịntanetị na-akwụghị ụgwọ (ohere ozi 5/5 GB)
$400.00 / Afọ
07 - 12 Peeji
3 Họrọ Nhọrọ
Ntinye isi ihe nye SE
$600.00 / ọnwa
12 - 20 Peeji
Onye mere okike 4
5 Họrọ Nhọrọ
20 Akara Mbinye aka
$ Ka anyi kwuo okwu maka oru puru iche
Enwepu Ọdịdị Mobile
Sava raara onwe ya nye na Ngwọta ojii
Imewe & Developmentv
• Nnyocha nyocha: Understandghọta ebumnuche ndị ahịa, ndị na-ege ntị, arịrịọ atụmatụ zuru ezu ma kpokọta ozi dị ka anyị nwere ike ịnakọta.
• Akwụkwọ ikike ọrụ: Chaịlị ọrụ ahụ na-achịkọta ozi ezukọtara ma kwenye na isi okwu gara aga. Akwụkwọ ndị a na-adịkarị nkenke ma bụrụ nke na-enweghị oke ọrụ, ha na-arụkwa ọrụ dịka akwụkwọ ntụrụndụ n'oge ọrụ ahụ.
• Maapụ saịtị: A kwadebere map saịtị zuru ezu nke emechara na ntuziaka, ndị ọrụ njedebe nwere ike ịla n'iyi ma ọ bụ chọọ ozi ngwa ngwa.
• Nkwekọrịta na-akọwapụta ọrụ, nwebisiinka na isi ego. Nke a bụ ihe dị oke mkpa na akwụkwọ a kwesịrị ịgụnye usoro ịkwụ ụgwọ, nkeji okwu mmechi, usoro nkwụsị, ikike nwebisiinka na usoro iheomume. Kpachara anya iji kpuchie onwe gị na akwụkwọ a, mana bụrụ nkenke ma rụọ ọrụ nke ọma.
Usoro a haziri ahaziri bụ ihe na-aga n’ihu na ozi akọwara n’ime ọkwa atụmatụ ịbanye n’iru. Ihe nnabata bu isi bu ihe edeputara na saịtị ma nke kariri, nnochite anya. Ozugbo emechara usoro nhazi, ọrụ a kariri ma ọ bụ obere emeela, mana maka enweghị ọdịnaya na njiri mara pụrụ iche.
Ibe na koodu bara uru XHTML / CSS Ọ bụ oge nzuzo. Ghee ihe ederede ikpeazụ Photoshop ikpeazụ, ma dee HTML na CSS maka njirimara bụ isi. Ihe ndị na-emekọ ihe ọnụ na jQuery na-abịa mgbe emechara: maka ugbu a, kpoo ihe nlere anya na ihuenyo, hụ na ịgbanwere koodu niile tupu ịga n'ihu.
Usoro ndebiri maka ụdị ibe ọ bụla
Zụlite ma nwalee atụmatụ pụrụ iche na mmekorita: Anyị na-enwe mmasị ilekọta nke a tupu ịtinye ọdịnaya static n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ na-enye ọrụ dị ọcha na-enweghị oke.
Nyochaa ma nyochaa njikọ na arụmọrụ: Ugbu a anyị na-enyocha saịtị ahụ site na iji njikwa faili gị dị ka ihe nduzi, na-agagharị na ibe ọ bụla e mepụtara, nke gụnyere, ihe niile si na peeji nke ụlọ gaa na peeji nkwenye maka iji hụ na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma yana anyị agbagharala ihe ọ bụla anya ma ọ bụ rụọ ọrụ.
Ebumnuche ebumnuche mmalite bụ ịkwadebe ọrụ ahụ maka ikiri ọha. Nke a na-achọ polishing ikpeazụ nke ihe mmebe, nnwale miri emi nke mmekọrịta na atụmatụ na ihe kachasị mkpa, ịtụle ahụmịhe onye ọrụ.
Nnyocha: Ndị otu anyị na-achọpụta akụkụ nke ọrụ a ga - eme ka ọ kawanye mma.
Nyefee gaa na sava dị ndụ: Nyocha ikpeazụ nke ọrụ ngo a na-eme ugbu a.
Nnwale: Ugbu a, anyị ga-eji ngwa ọrụ nyocha ikpeazụ wee rụọ ngwaọrụ niile dịnụ: ndị na-ekwu okwu, ndị na-enyocha koodu, nyocha ahụike webụsaịtị, ndị na-enyocha njikọ, wdg.
Nchọgharị Cross-nchọgharị na nzaghachi nzaghachi: Ndị otu anyị ga-elele ọrụ ahụ n'ọtụtụ ihe nchọgharị ka ntụgharị, Firefox, Chrome, Opera, Safari, iPhone, Blackberry, wdg.
A na-enye ọrụ IT anyị n'ọtụtụ azụmahịa na ụdị na nha ọ bụla. Anyị na-eje ozi, n'etiti ndị ọzọ, ọrụ ndị na-esonụ:
Dijitalụ & Elu-Tech
Mbupu na ngwa agha
Ngwa ahịa na ahịa
IT na nkwukọrịta
Ọrụ ego na ụlọ akụ
Companieslọ ọrụ azụmaahịa
Bara Uru Links na Omenala Webdesigning